Buche de Noel (Yule Log Cake) Recipe + Tutorial - Sugar Geek Show - Recipe
Buche de Noel Cake (Yule Log Keke)
Buche de Noel Cake (Yule Log Cake) ndeye yakasarudzika Krisimasi Dessert
Buche de Noel keke (kana yule log keke) inowanzo gadzirwa kubva kune yero chipanje keke uye izere nechokoreti buttercream. Kunze kwacho kunowanzova nechando nechokoreti ganache uye kupihwa hunyanzvi hwakafanana nemakwati. Inowanzozadzwa guruva neshuga yeupfu kuti ifanane nechando uye dzimwe nguva ine zvimwe zvekushongedza zvakagadzirwa kubva kumarzipan kana meringue howa.
Kuti ugadzire Buche de Noel, unofanirwa kuita:
Vanilla sponge roll keke
Chokoreti buttercream kuzadza
Chokoreti Yakanyorova Ganache Frosting
Meringue howa (kusarudza)
Verenga pamusoro kuti udzidze zvakawanda nezve iyo Yule danda keke, iyo yakakwana nzira uye nhanho-nhanho mirawo maitiro ekugadzira yako yakanaka Bûche de Noël Kisimusi yepakati. Yakazara vhidhiyo dzidziso mune yekubheka kadhi pazasi kweiyi blog positi.
Nhoroondo yeBuche de Noel (sekuziva kwedu)
TO yule danda (kwete keke) idanda rinopiswa munzvimbo yako yemoto panguva yemutambo wechando. Yaiva pakutanga tsika yeNordic. Yule izita remhemberero dzekare dzeZima Solstice muScandinavia nedzimwe nzvimbo dzekuchamhembe kweEurope, senge Germany. Iyo danda (dzimwe nguva muti wese) yaigona kunyatsosarudzwa uye yozounzwa mumba kuti ivhenekere kune rimwe divi, iyo yasara ichienderera mumba. Chishoma chedanda chaizopiswa zuva rega rega, ichiwedzera kuburikidza nemazuva gumi nemaviri eKisimusi.
Izvi zvinonzwika kwandiri zvakanyanya sekuunza muti weKisimusi mumba. Ndiri kufara isu tangoisa mwenje pamuti wedu izvozvi uye usatungidza pamoto. Ndichabatirira kubheka iro rangu danda.
Zvichienderana nedunhu, zvinhu zvakasiyana-siyana (zvakaita semunyu kana kucema) zvaisaswa pamusoro pegodo zvisati zvatsva kuti zviunze rombo rakanaka kana kuve nechokwadi chegoho rakanaka regore rinotevera. Madota kubva kune yule danda kwaanoshandiswa mumishonga uye nerombo rakanaka potions.
gluten yemahara shuga yemakeke mapheka
Asi izvi zvinei nechekuita neye yule danda keke? Zvakanaka, zvishoma nezvishoma, kupemberera kwekupisa muti wese mumba yekutandarira kwakafa. Pamwe yakawandisa moto wemumba? Pakupedzisira, vanhu vaingoisa huni imwechete munzvimbo yavo yemoto kuti vamiririre iro danda.
Dzimwe nguva pakanga pasina nzvimbo yemoto zvachose uye danda rakaiswa patafura sechinhu chepakati. Izvo zvinongonzwisisika kuti pakupedzisira mumwe munhu akasarudza iro keke danda raizove riri nani kupfuura danda chairo. Zviripachena iyi dhizeti dhizaini yakabvisa ikava dhizeti inozivikanwa kwazvo pasirese.
MuFrance, iyo buche de Noel yaigadzirwa nekeke yesiponji isina hupfu, yakazadzwa nechokoreti yakarohwa kirimu uye ndokuzungurirwa muchimiro cherogi. Yakazopukutwa guruva neshuga yezvinotapira kufanana nechando padanda. Isu tinowanzoreva bûche de Noël seYule log keke muAmerica.
Ndeipi zuva raunofanira kutanga kubheka yako Buche de Noel?
Ngatitaurei nezve maitiro ekugadzira iyi keke. Ronga pakuita zvimwe zvinhu zuva rakapfuura kushongedza kuti hupenyu hwako huve nyore.
Ita ganache uye rega igare pakushambidza kwemukati
Gadzira mupumburu wekeke chipanje, zadza ne buttercream uye chill husiku hwese
Gadzira meringue howa
gadzira chokoleti nyoro ganache kutonhora
Rongedza chipanje keke uye chill
Unganidza yako Buche de Noel keke uye chill kweinenge awa imwe usati washumira.
Guruva neshuga yeupfu usati washumira.
Kugadzira mupumburu wekeke chipanje haina kunyanya kuomarara asi pane zvimwe zvinhu zvauchazoda kuchengeta mupfungwa kuti ubudirire.
Sungai pamwe chete mazai neshuga pamusoro pehari yemvura inomira
Kupira mazai padanho reribhoni
peta muzvinhu zvakapetwa zvakaomeswa muzvikamu zvitatu
pararira pane pepa repani rakakomberedzwa nemapepa echinyorwa kusvika kumicheto
Bika kwemaminitsi masere kusvikira wangoiswa
sunungura keke kubva kumucheto kwepani nebanga
Flip keke padanda rinotonhorera uye bvisa bepa rembwa. Isa tauro yetii pamusoro pekeke
Flip keke kumashure. Guruva neshuga yeupfu
Rongedza chipanje chakasimba mukati meketi yetiyi uye rega itonhorere
Ita shuwa iwe unorova rako rezai / shuga musanganiswa padanho reribhoni. Iyo ribhoni nhanho ndeye apo iyo batter inopetwa katatu muhukuru uye inogara pamusoro payo payo paunenge uchidururira iyo mumabhonzo kubva kune whisk.
Simudza upfu mumusanganiswa weii. Peta muupfu hwako zvinyoro nyoro kana iwe uri panjodzi yekurasikirwa nemhepo yese mukeke rako rechipanji.
Paradzira iyo batter nzira yese kumucheto kwepani yako yakaiswa pepa pepa. Hapana chikonzero chekuzadza pani.
Usapfuure keke rako kana mativi ako angave akaoma uye atsemuka paunoyedza kuumbundisa.
Tenderedza yako keke kureba-kuchenjera kuti ive yakareba kuitira kuti iwe uwane zvakakwana kugura magumo uye haizove mapfupi.
Tambanudza keke rako kubva muchoto netowel yetii. Kana iyo keke ichidziya inobatsira iyo keke kuichengeta yakatenderera chimiro sezvo inotonhora, ichideredza mikana yekutsemuka gare gare.
Rega yako keke itonhorere husiku usati watema zvidimbu zvakatsvinda.
Maitiro ekuunganidza sei Buche de Noel
Kamwe keke yako yesiponji yatonhora kweinenge awa. Iwe unogona kunyatso kuisunungura uye zadza mukati neyakagadzika chokoreti buttercream, chokoreti ganache.
Sponge keke haina kunyanya kunyorova saka kana iwe uchida iyo moister, shambidza pasi nesira yakapusa kutanga uye shandisa kuzadza senge chokoreti huchi mousse kana kamu cream . Wedzera cocoa poda kune yakarukwa kirimu kuti ive chokoreti. Wobva wamonera keke kumashure kumusoro rakanaka uye rakasimba kuti parege kuva nemipengo mukuzadza.
ngirozi chikafu chekeke nema strawberries uye yakarova cream cream
Rongedza kumusoro chipanje kureba
Isa keke mufiriji kweinenge awa kana mufiriji usiku hwese kuti utonhore kuzadza.
Cheka magumo erake keke kuti uburitse iyo swirl yekuzadza. Wobva wadimbura chimwe chidimbu chekeke re roll pane imwe kona shoma uye woisa parutivi rwegwaro kumiririra bazi.
Frost kunze kweBuche de Noel nechokoreti ganache. Shongedza kunze pamwe neyako meringue howa, nyowani cranberries uye mapfumo emarosemary. Pukuta chinhu chose zvishoma neshuga yeupfu kuita kunge chando.
Chill usati washumira. Iyo Buche de Noel keke inogara kwemazuva matatu mufriji.
Mamwe Krisimasi Mapoka ekuda
Gingerbread imba recipe
Yakagadzirwa roll keke recipe
A Buche de Noel keke keke rakareruka uye rinofefetera keke rakazadzwa nechokoreti buttercream uye chisviniro neganache kuti ifanane neyeye danda. Gadzirira Nguva:10 mins Nguva Yakabika:8 mins 1 hr Makorori:388kcal
Nzira Yekugadzira Buche De Noel Keke (Yule Log) kubva Shuga Geek Ratidza on Vimeo .
▢3 yakakura (100 g) mazai machena anenge maawa matatu
▢1/4 teaspoon kirimu yetartar
▢5 ounces (142 g) shuga yakawanda
▢1/2 teaspoon vanilla yakabudiswa
▢1 nzwara munyu
▢1/2 teaspoon cocoa upfu
Kupeta Keke Zvinongedzo
▢8 yakakura (454 g) mazai
▢8 ounces (227 g) shuga
▢8 ounces (227 g) upfu hwekeke kana hupfu hwechinangwa
▢1/2 teaspoon munyu
▢piri teaspoon vanilla yakabudiswa
▢4 ounces pasteurized zai vachena
▢8 ounces hupfu hwehuga
▢8 ounces unsalted ruomba
▢1 teaspoon vanilla yakabudiswa
▢1/4 teaspoon munyu
▢1 ounce cocoa upfu
▢16 ounces (454 g) chokoreti semi-inotapira mhando yakanaka
▢14 ounces (397 g) rinorema kurova kirimu
▢mira musanganisi nesimbi mbiya uye whisk chinamatira
▢1/2 pepa pani (13'x18 ')
▢wepakati muto pani
▢# 2A muridzo wepombi
Pre-kupisa huni yako kusvika 225ºF uye isa bheji pepa nebepa rechinyorwa
Uyai 2 masendimita emvura kuti simmer muhari. Isa simbi isina tsvina yekuvhenganisa ndiro pamusoro pemvura. Haifanirwe kubata mvura. Sungai mazai machena uye shuga uye whisk kuti mubatanidze. Dzimwe nguva whisk sezvo kuri kupisa kugovera kupisa uye nekunyungudutsa shuga.
Kamwe mazai machena ako pa110ºF (kana kana iwe pausinganzwe chero tsanga yeshuga pakati peminwe yako) unoverengwa kurova Isa ndiro yacho pachigadziko chako chekumira ne whisk attachment. Whisk pa med kweminiti imwe, wedzera mukirimu yetartar, munyu uye kuravira.
Bump kumusoro uye rega chikwapuro kusvikira iwe wasvika STIFF matenga.
Isa muromo wepombi muhomwe yako yepiping uye bvisa pamuromo wehombodo. Pombi yako madzinde nemakepisi (ona vhidhiyo) Bika kwemaminetsi makumi matanhatu, wobva wadzima huni asi usaburitse makuki. Regai vagare muchoto kusvikira vatonhora chose. Ini ndinosiya yangu mukati mehusiku.
Tora gomba mujinga rehowa uye wedzera chidiki cheganache kana chokoreti yakanyungudutswa mugomba. isa chivharo padanda.
Sanganisa cocoa upfu uye vanilla. Splatter misoro yehowa neyakaomarara pendi bhurashi.
Muchikwata chepakati, chengetedza kirimu kusvikira kungomira. Usabike. Dururira pamusoro chokoreti uye rega ugare kwemaminitsi mashanu.
Wedzera muvanilla uye munyu uye whisk kusvikira yatsetseka. Dururira mupani isina kudzika uye ufukidze neplastiki yekumonera kutonhorera pane tembiricha yemukati husiku.
Tora Keke Batter
Preheat oven yako kusvika 400ºF pamwe nehovhoni rack mukati. Tora 1/2 'pepa pani (13 `` x18') nemapepa echinyorwa.
Zadza chikupu chako ne2-3 'mvura uye uuye kumota pamusoro wepakati wakanyanya kupisa kusvika uchibika wobva waderedza kupisa kusvika pakati kana kusvika mvura ichirira.
Isa mazai, shuga uye munyu mumudziyo unosanganisa uye sanganisa pamwe ne whisk
Isa ndiro yacho nemusanganiswa pamusoro pemvura yako inomira. Uchishandisa whisk yako, fambisa musanganiswa weii zvishoma nezvishoma kusvikira shuga granules yaparara (inenge 110ºF) Bvisa kubva pamoto.
Isa mbiya yako kune yako yekumira musanganisi neiyo whisk yekubatanidza. Wedzera muvanilla yako uye whisk pakakwirira kwemaminetsi maviri kusvika usati wasvika padanho reribhoni (ona zvinyorwa). Iko kusanganiswa kunofanirwa katatu muhuwandu uye kureruka muvara.
Simudza mu 1/3 yeupfu wako musanganiswa uye peta (ona zvinyorwa) hupfu zvinyoro nyoro pasina kukuvadza chimiro chemusanganiswa wako wezai. Dzokorora dzimwe mbiri pamwe neupfu kusvikira zvangosanganiswa.
Paridza batter zvakaenzana mupani yako yakagadzirirwa pepa uye upararire neyakagadziriswa spatula kana banga munzira yese kusvika kumucheto kwepani. Usazora pani yako.
Bika kwemaminetsi masere uye wozobvisa kubva muchoto woisa panzvimbo inotonhora
Pakarepo shandisa banga rekuratidzira kunyatso cheka kumucheto kwesiponji kure kubva kumativi epani. Dura pasi nehupfu hwehuga. Isa chimwe chidimbu checheche pamusoro pekeke, uyezve imwe yekutonhora rack uye flip pamusoro kuti ubudise keke kubva pani.
Bvisa pepa recheche zvakanyatsonaka uye guruva pasi neakawanda hupfu hwehuga.
Isa tauro yetii pamusoro pekeke uye nyatso kumonera mumhepo (LENGTHWISE). Isa mufiriji kuti utonhore kweawa imwe usati wazadza nechando.
Simudza pamwe chete hupfu hwehuga uye cocoa poda kuti ubvise chero mapundu.
Isa mazai machena, hupfu hwakatsetseka uye cocoa poda mune yemira musanganisi ndiro.
Isai whisk uye sanganisai zvigadzirwa pazasi uye wozorova kumusoro kwemaminetsi mashanu.
Wedzera muhotela yako mumachunks. Wedzera muvanilla uye munyu. Whisk pakakwirira kusvikira mwenje uye fluffy.
Bvisa whisk uye isa padhata padyo pane musanganisi. Rega buttercream yako isanganise pazasi kusvikira musanganiswa wakatsetseka uye wakasviba uye pasina mabhuru akasara. Izvi zvinogona kutora kusvika pamaminitsi makumi maviri (sarudzo)
Roll Keke Gungano
Ngwarira kumisikidza yako yakatonhorera chipanji. Inogona kutsemuka zvishoma kusvika pakati chaipo pemhepo uye izvo zvakajairika.
Paradzira danda rekokoreti yako buttercream pamusoro penzvimbo dzese
Ngwarira kumonera keke rako kumashure. Cheka magumo ekeke keke kuti ataridzike akanaka uye akachena uye wozoendesa mundiro.
Cheka anenge 4 'kubva kumucheto mumwe pakona makumi mana nemashanu' uye woisa padivi pechidimbu chakareba chegwaro kuti rioneke sebazi
Frost yekunze neyako yakanyoroveswa ganache
Shongedza neyako meringue howa, cranberries uye rosemary sprigs
Guruva zvishoma neshuga yeupfu usati washumira
Shumira chilled. Ichagara kwemazuva matatu akavharwa mufriji.
Chikamu chebhoni ndipo panosanganiswa zai rako neutaundi, rinovhenekera muvara uye parinokandwa pariri, rinogadzira ribhoni remubatter rinogara pamusoro pevhu risati radzikira mukati maro zvishoma nezvishoma. Vhura iyo batter nekumhanyisa spatula yakatenderedza kumucheto kwekunze kwebatter uye mbiya uye zvinyoro nyoro kusimudza iyo batter pachayo. Izvi zvinobvumira batter kusanganisa pasina kukuvadza chimiro chisina kusimba.
Kushumira:1kushumira|Makorori:388kcal(19%)|Carbohydrate:44g(gumi neshanu%)|Mapuroteni:7g(14%)|Mafuta:makumi mavirig(31%)|Mafuta Akaguta:gumi neimweg(55%)|Cholesterol:125mg(42%)|Sodium:188mg(8%)|Potassium:223mg(6%)|Fiber:pirig(8%)|Shuga:30g(33%)|Vhitamini A:473IU(9%)|Vhitamini C:1mg(1%)|Calcium:46mg(5%)|Iron:pirimg(gumi neimwe%)
maitiro ekugadzira fondant icing kumba
Iko kunhuvira kwakatsvuka velvet keke inofanirwa kuve
maitiro ekugadzira makeke nhanho nhanho